velomy cushion "perla beige" - Moi Mili
Home > velomy cushion "perla beige"
velomy cushion "perla beige"
Ny ondana vita amin'ny Velvet Moi Mili dia soso-kevitra ho an'ny haingo ny tranonao. Izy ireo dia fidirana am-boalohany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, amin'ny haingoana seza na rattan seza. Ny ondana dia namboarina matevina ary voakapa avy amin'ny lamba volondana avo lenta amin'ny beige maivana. Ny lamba marevaka dia hampiditra rivo-piainana mahafinaritra ao anatiny, ho tsara tarehy ao amin'ny efitrano marevaka marevaka, izay hanjakan'ny loko eto an-tany. Hamorona famoronana tantara foronina ao amin'ny efitran'ny zanakao izy. Mamporisika anao izahay hamorona andian-ondana maromaro, toa majika izany.